Mozika Rock : Hamarana ny taona etsy amin’ny Is’Art Galery ny tarika Iary -
AccueilVaovao SamihafaMozika Rock : Hamarana ny taona etsy amin’ny Is’Art Galery ny tarika Iary
Famaranana ny taona miavaka. Raha ny gadon-kira samihafa, indrindra ny mozika mafana, no matetika hita amin’ireo hetsika hamaranana ny taona, dia ny mozika Rock kosa no hanamarihan’ny tarika Iary izany ny 31 desambra izao manomboka amin’ny 7 ora hariva etsy amin’ny Dôma Ankorondrano. Hetsika natao indrindra ho an’ireo mpiodana io gadon-kira io. Fotoana handrenensana sy hiainana amin’ny endrika hafa ireo hira efa nahafantarana ity andriambavilanitry ny rock sy ny ekipany ity. Anisan’ireo nahafantarana ity mpanakanto ity ny « Ny fanantenanako », « Modia amin’izay », « aoka ihany »… ary indrindra ny hiaka farany navoakany tamin’ity taona ity « Isaorako ianao ».
Efa elaela no tsy tazana tamin’ny fampisehoana teto an-drenivohitra ity mpanakanto ity, ka fotoana indray ity ihaonany amin’ireo mpankafy azy sy ny mpankafy ny « rock metal » malagasy. Anisan’ny taona niketrahan’i Iary sy ny ekipany vokatra vaovao rahateo ity taona ity.
Amin’ny maha fetin’ny faran’ny taona azy, hivelatra amin’ny hetsika hafa ny fiarahana nefa tsy mivoana amin’ny tontolon’ny rock. Mpanakanto maromaro tsy ampoizina no hiaka-tsehatra hiaraka hanafana ny sehatra sy hitondra ny rehetra any amin’ny taona vaovao 2018.